Okuzenzakalelayo 3D Mask Ukwenza Machine Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Okuzenzakalelayo 3D Mask Ukwenza Machine Factory
Okuzenzakalelayo 3D Mask Machine (ngohlelo lokutholwa kwe-CCD nokupakisha okuzenzakalelayo)
Isifihla-buso esithandwayo eKorea, Kungumugqa wokukhiqiza othomathikhi ngokuphelele, idivayisi yokuqoqa imfucuza iyatholakala. Lolu hlobo lomshini wobuso obubizwa nangokuthi i-3D mask noma uhlobo lwenhlanzi uhlobo lomshini. uhlelo lokupakisha okuzenzakalelayo nomsebenzi wokuthola we-CCD kuzoba ngokuzithandela. ukubonakala okulula futhi nosayizi ohlangene.
Intengo: USD110000 / SET
Intengo: USD55000 / SET
Isifihla-buso esithandwayo eKorea, Kungumugqa wokukhiqiza othomathikhi ngokuphelele, ukubonakala okulula futhi nosayizi ohlangene. Isixhumanisi esizenzakalelayo se-3D mask kumshini wokupakisha.